Youtube ဘာနဲ့ကျော်လို့ရမလဲ. — MYSTERY ZILLION
အကို တိုရေ ၂၁၂.၉၃.၁၉၃.၈၃ မရတော့ ကျွန်တော် တို့ဘာနဲ့ ကျော်လို့ရမလဲ.you tube တို့ဘာတို့ကို ဘယ်က ကျော်ကမလဲ ကျွန်တော် ဆီက freedom ကလဲ မရတော့ဘူး။ဘယ်ဆော့၀ဲ နဲ့များရလဲဗျာ။လင့်လေးပေးကြပါဗျာ။freedom သုံးဖို့ဆိုရင် firefox မှာ ဘာနဲ့ လုပ်ရမလဲ..
ကူညီပါနော်။ အကို တို့ အမ တို့:D
Freedom ကိုတော့ ဒီလင့်ခ် ကနေဒေါင်းလို့ရပါတယ်
U96 ကတော့ ဒီမှာ ပါ
အထက်ကဟာတွေမရရင် jap ဆိုတာရှိပါသေးတယ်။
အသေးစိတ်ကို ကိုယောင်စိန်သိပါတယ်၊ မေးလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ https://www.btunnel.com ကနေ youtube ကိုသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကိုလည်းစမ်းကြည့်ပေါ့။:D
Freedom ပွင့်သွားရင် Mozilla ရဲ့ Proxy မှာ localhost port 8080 လို့ပြောင်းလိုက်ပါ
ကျွန််တော်ဆီမှာ Freedom ကော U 96 ပါလိုင်း ပြန်ပြန်ကျသွားလို့ အဆင်မပြေပါဘူး ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်
proxy no များ အသစ်ရှိရင် ရှယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ...
proxy no အသစ်လိုချင်ရင်တာ့ မြန်မာတယ်လီပို့စ် နဲ့ အမ်ပီတီမှာ ပဲ သွားတောင်းတော့ဗျာ...:P:P
တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ Proxy no တွေ ကို အကုန်ပိတ်ပြစ်လိုက်တာ ပ ါ.. ကျွန်တော်လည်း တော်တော်များများ ရှာပြီး တော်တော် များများ စမ်း ကြည့်ပြီးပါပြီ..မရတာ များပါတယ်. ရတဲ့ proxy ကျတော့လည်း .. port နဲ့ပြန်ပိတ်တာလည်းတော့မသိဘူးဗျ...ထုံးစံအတိုင်း ပဲ .Access Denied တွေကြည့်ပဲ များပါတယ်..............
တစ်ခုတစ်ခုမှာ ကျော်တာတွေ တော်တော်များများပါတယ်။
ကျွန်တော်အဲဒီမှာ ကျော်တာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။